Ahoana no fanomanana rakitra UVI varnish ao amin'ny Photoshop haingana | Famoronana an-tserasera
Tsy sarotra ny fanomanana rakitra varnish UV ao amin'ny Photoshop. Mba hahatratrarana vokatra tsy manam-paharoa sy matihanina amin'ny alàlan'ny fanomezana ny volavolanao izay fikitika majika mamirapiratra izay mahavita manome azy io fiangaviana sary lehibe kokoa amin'ny alàlan'ny famolavolana tsotra mankany amina endrika matihanina kokoa, avy eo dia hanazava ny fomba anaovany azy tsikelikely isika.
UVarn varnish dia famaranana be mpampiasa amin'ny zava-kanto sary mba hampifanohitra ny faritra iray amin'ny faritra hafa amin'ny alàlan'ny fametrahana sarimihetsika mangarahara izay mamadika faritra manokana amin'ny endrika matte ho gloss. Mianara amboary ny rakitrao miaraka amin'ny varnish UVI amin'ny fomba matihanina, haingana sy azo ampiharina.
Ny zavatra voalohany tokony ho fantatsika rehefa mampihatra varnish UVI dia ny mahafantatra ny atao hoe Varnish ary ny antony hampiharantsika azy, ny idealy dia ny mampihatra azy miorina amin'ny filàna sasany: famolavolana, estetika, fifanoherana ... sns. Miankina amin'ny zavatra ilaintsika, hampihatra ny farany amin'ny faritra iray na hafa amin'ny volavolanay vita pirinty.
Raha mijery ny sary eto ambany isika dia afaka mahita fampiharana UVarn varnish amin'ny endrika pirinty. Raha hitantsika fa mahavita manome famirapiratana sy mifanohitra amin'ny endrika ny verinia, manasongadina amin'ity tranga ity ny typografia ao ambadika. UVarn varnish dia mamadika endrika amam-borona matte ho lasa faritra manjelatra.
Ankehitriny rehefa fantatsika hoe inona ny UVI Varnish, dia hianarantsika ny fomba amboary ny rakitra UVI ao amin'ny Photoshop amin'ny fomba tsotra sy haingana. Ity famaranana fanontana ity dia be mpampiasa amin'ny fanontana ary ny rafitra izay hianarantsika hampiasa dia hanampy antsika hanomana famaranana hafa toy ny: ravina volamena, ravina volafotsy ... sns.
Tsy maintsy manapa-kevitra isika izay ny faritra izay hampiharantsika ny UVI Varnish, raha vantany vao mazava momba an'io isika dia hanomboka hiasa miaraka amin'ny fisie ao amin'ny Photoshop.
Ny zavatra voalohany hataontsika amin'ny Photoshop dia miasa amin'ny sosona ny singa rehetra amin'ny famolavolana, ilaina ny manana ny tsipiriany amin'ireo singa izay hamenoantsika UVI Varnish fotsiny. Ny filamatra dia ny miasa amin'ny fomba milamina amin'ny alàlan'ny fampiasana sosona sy vondrona, izay samy voatonona anarana tsara avokoa.
Ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia mamorona vondrona izay hametrahantsika ireo sosona izay hanana UVI Varnish ihany, amin'izany fomba izany dia hananantsika amin'ny lafiny iray ny famolavolana tany am-boalohany ary amin'ny lafiny iray ny varnish UVI.
Raha vantany vao naverinay ireo sosona izay hanana UVI Varnish ary napetrakay ao anaty vondrona izy ireo, ny zavatra manaraka hataontsika dia fenoy mainty 100% ilay sosona.
Mba hamenoana ny sosona dia mila tsindrio ny menio ambony Photoshop ao amin'ilay faritra isika manova / mameno.
Manampy mainty 100% izahay any amin'ireo faritra hampiharanay ny UVI Varnish. Mba hahafahantsika misafidy dia tsy maintsy tsindrio ny fibaikoana + kitiho ny sosona izay hofenointsika.
Amin'ny sary eto ambany dia afaka mahita ny varavarankely vaovao misokatra rehefa mameno sary iray isika, tsy maintsy ataovy 100% K eny faritra miloko CMYK. Ilaina ity dingana ity mba hahafahan'ny faritra misy ny UVI Varnish hipetraka tsara amin'ny gazety.
Raha nandeha tsara ny zava-drehetra dia tokony hanana zavatra toy ny valiny hitantsika amin'ny sary etsy ambany isika.
Ny dingana farany dia misy afeno ny sosona rehetra amin'ny famolavolana fa tsy manana UVarn Varnish izy ireo, mamela ireo faritra mainty hanana ny Varnish fotsiny amin'ny fotoana fanontana.
Raha vantany vao azontsika ny faritra rehetra misy UV Varnish, ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia alao antoka fa hanafina ireo sosona rehetra izay tsy manana Varnish sy avelao ny vondrona UVI ihany izay noforonintsika hatramin'ny voalohany. Manaraka izany dia tsy maintsy ampidirintsika ireo takelaka rehetra ary tahirintsika ao anaty PDF ilay rakitra, tsy maintsy tahirintsika ny famolavolana mahazatra sy kinova UVI.
Ny fisie UVI dia toy ny sticker izay apetraka amin'ny faritra sasany amin'ny volavola, tsy maintsy ataontsika antoka fa ny antontan-taratasy roa dia mifanentana amin'ny iray hafa, raha toa ka manetsika sosona amin'ireo rakitra roa isika, dia ho UVI nafindra toerana. Raha izany no mitranga amintsika dia tena jaza io satria ho fahadisoantsika amin'ny maha-mpamorona antsika ary tsy maintsy mandoa ny fanitsiana izay angatahan'ny mpanjifa isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Ahoana ny fanomanana ny fisie varnish UVI ao amin'ny Photoshop